Amakhondo - Izisombululo ze-OMG
Eli lixesha elonwabisayo kwenkampani yethu! Siyinkampani esekelwe kwi-High-Tech yaseSingapore yaseKorea eyenza ivelise kwaye ithengise iiNkqubo zoNyaka zeNkcazo zendawo (RTLS) kwiimarike zonyango. Silandela izixhobo kunye nabantu ngexesha langempela. Iisistim zethu zisebenza namhlanje kwizibhedlele zehlabathi ze-100. Sincinane, inkampani ekhula ngokukhawuleza, enomdlandla, onomdla kunye nokungaqhelekanga.
Okwangoku, sifuna umntu oqaqambileyo ophakamileyo, oqeqeshiweyo, okhuthazayo, onobubele kunye nokunikezelwa ithuba elizayo. I-OMG Iisombululo zivuza umgangatho ophezulu ekuqhubekeni kweenjongo zethu eziqhelekileyo kwaye zihlonipha ngokuthe ngqo umntu kunye nobuchule bokudala, ubugcisa kunye nenkcubeko yeqela lethu. Isithethe sethu siye savumela ukuba sitsalane kwaye sigcine abantu abanetalente abaqhutywa yombono wendlela esiya kuguqula ngayo inkqubo yokunakekelwa kwezempilo.
29178 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-71 Namhlanje